Waxaa jiray seddex habeen rabshado ah oo ka dhacay Des Moines dilkii booliis ee George Floyd | KWIT
Andjer wuxuu leeyahay waxaa jira waxyaabo waxyaabo lagu dari karo hadda. Iyadu waa qayb ka mid ah kooxda xallinta ee uu taliyuhu meeleeyay. Anderu wuxuu yidhi hadda waa waqtigii la raadin lahaa mar kale.
Reynolds wuxuu kaloo taageeray go'aanka ah in bandoow lagu soo rogo 9:00 p.m. loogu talagalay Polk County caawa oo ay bogaadiyeen ficilada waaxda booliska ee Mo Moines, Xafiiska Polk County Sheriff iyo Iowa State Patrol si ay gacan uga geystaan xakameynta dibadbaxyada.
Qofka ka tirsan aqalka Congress-ka Steve King wuxuu leeyahay maanta wuxuu soo saaray sharci maanta raadinaya "inuu siiyo gargaarka federaaliga ah wax soo saareyaasha hog ee lagu qasbay inay cunaqabateeyaan tuugada sababtoo ah masiibada COVID-19.
King wuxuu sheegay in lacagaha biilku ay ka soo bixi doonaan 16 bilyan oo doollar barnaamijka amaahda badeecadaha. Wuxuu sheegay in biilka sharci darrada ahi uu damaanad qaadi doono beeralayda u baahan in ay xajistaan xajistooda si xawli ah.
Kumanaan reer Iowans ah waa inay maanta helaan waraaqdooda maqnaanshaha codbixinta maqnaanshaha ama ay cod shaqsi ah maalinta berrito u codeeyaan. Maanta waa maalinta ugu dambeysa taariikhda loo asteeyey codbixinta maqnaanshaha ee doorashada koowaad ee berri.
Dhibaatada jirta awgeed, Xoghayaha Gobolka Iowa Paul Pate ayaa codsi cod-bixiye maqnaasho u diray cod-bixiye kasta - oo codbixinta hore ee doorashada xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga ayaa diiwaangelin doonta rikoor. Pate wuxuu leeyahay in ka badan 486,000 oo waraaqood oo maqanaansho ah ayaa loo codsaday doorashada koowaad ee berri. Jimcihii, boqolkiiba 69 codbixintaas ayaa laga helay xafiiska hanti-dhowrka gobolka.
Sahan cusub ayaa muujinaya in hogaamiyaasha ganacsatada ay rajo weyn ka qabaan in dhaqaaluhu uu bilaabi doono inuu soo kabsado dabayaaqada sanadkaan gobolka sagaalaad ee Midwest iyo Plains inkasta oo ay jirto saameynta joogtada ah ee cudurka dillaaca coronavirus. Tilmaanta guud ee dhaqaalaha gobolka ayaa soo hagaagtay bishii Maajo oo noqotay 43.5 laga bilaabo Abriil 35.1. Tirakoobka kalsoonida ee sahanka ayaa la sii daayay Isniinta isniintii wuu fiicnaaday si loo soo jeediyo in ganacsiyadu ay rajo ka qabaan in dhaqaaluhu uu bilaabi doono inuu dib u soo laabto lixda bilood ee soo socota.